Self fihanihana HGY28 HGY32 - China Qingdao CO-NELE Group
Self Mananika HGY28 HGY32
Mode ny fiara: tanteraka hydraulic
Pipeline savaivony: 125mm
Rehefa mampiasa, dia ancred ny tany amin'ny initiallly nanomana lavaka. Raha takiana mba hitsangana, tilikambo vanobe koa samy ilaina mba hanandratra ny fametrahana boom niakatra ho any amin'ny rihana ambony manaraka noho izy rehefa niakatra anchored.one fotoana dia afaka mahafeno ireo fepetra takiana amin'ny fametrahana ny simenitra rihana roa.
Voalamina tsara endrika, mora fandidiana, azo antoka ny fiarovana sy mety tsara ny fananganana trano avo
Type Hifantohan'ny Floor Self Mananika
mitsivalana Vokatr'izay 28m 32m 32m
Boom Length (MG) 12000/9100/6200 13960/10600/7430 88800/8000/8001/7840
Ny RubberHose 3m
miaraka Counterweight No counterweight
fonosana 40HQ * 2 40HQ * 2 40HQ * 2
Ny rafitra dia boom arced optimisé rehefa mampihatra CPU famolavolana. Ny boom nolaniana-hery avo ho an'ny famokarana vy takela amin'ny dingana ara-tsiansa. Izany dia manasongadina fijery tsara tarehy, ambony Hentitra loatra sy ny heriny, antoka tsara sy azo antoka tsara.
B. hydraulic rafitra
G andian-dahatsoratra vokatra izao tontolo izao-malaza nandray Alemaina Rexroth menaka paompy, mitanila miditra tsimoramora
(amin'ny fandidiana tahony) sy ny mizana miditra tsimoramora amin'ny faharoa anananareo betsaka, raha C ary E andian-dahatsoratra
vokatra nanangana Alemaina Rexroth solenoid directional miditra tsimoramora fanaraha-maso sy ny fifandanjana miditra tsimoramora
amin'ny faharoa vokatra. Efa tsara nisoroka ny mety ho fahavoazana ny Boom
izay mety ho vokatry ny hetsika hafainganam-pandeha, rehefa latsaka ny Boom dia midina, ary tampoka
ateraky ny solika varingarina ny fanerena eo ambany tafika ivelany, dia toy izany no azo itokisana ny ny Boom
Inner hydraulic menaka tanky mahatonga ny voalamina tsara rafitra sy malalaka swivel. Manome lehibe
mety ho fametrahana, dismounting sy fikojakojana, izay miantoka asa fanompoana intsony
ny fiainana sy ny tsara fampisehoana.
Amin'ny maha-rafitra mahitsizoro endriny, ny mihanika trano dia hentitra loatra, azo ianteherana sy mety
ho an'ny dismounting.
E. Slewing rafitra sy ny Reducer
Slewing reducer natsangany vokatra atao amin'ny marika malaza amin'izao tontolo izao ny Italia Comer, miaraka
lehibe torsion. Ny hoe miaraka amin'ny Integrated slewing mandanjalanja miditra tsimoramora atao amin'ny
Alemaina Hawei, dia hanatanterahany fandidiana malefaka sy azo antoka sy mafy orina fampisehoana.
G andian-dahatsoratra vokatra hanangana orinasa manokana analogue-maso Wireless lavitra atao amin'ny
Alemaina Hetronic, miaraka amin'ny mitanila miditra tsimoramora atao amin'ny Alemaina Rexroth, dia manao hetsika malama, hydraulic fiantraikany voafetra, ary ny fampisehoana azo antoka. Ankoatra izany,
dia azo atao ny stepless mahatonga fitsipika hafainganam-pandeha sy ny maro boom sy slewing fifandraisana, izay asa kokoa fahaiza-miasa mahomby indrindra.
■ C ary E andian-dahatsoratra vokatra hanangana orinasa manokana analogue-maso Wireless lavitra atao amin'ny TELECRANE Taiwan, izay mora sy mety miasa, tena mahatohitra ny
korontana sy ny azo itokisana amin'ny fampisehoana.
■ tsirairay dia miaraka amin'ny andian-dahatsoratra Wired lavitra maso ampiasaina amin'ny tsy maintsy.
Ny fanaraha-maso ny rafitra herinaratra izao tontolo izao nandray ny marika malaza herinaratra votoatiny, toy
araka ny Japoney Omron sy frantsay Schneider. Mandeha ho azy ny fiarovana ny maro no napetraka tao
amin'ny fanaraha-maso ny fandaharana, mba hisorohana ny misoperation sy miantoka ny rafitra ny azo itokisana.
Ny tsanganana na ny fanaka vy avo-hery amin'ny efamira takela endrika, miaraka amin'ny tsara tarehy,
rigidness sy ny hamafiny, ary koa azo itokisana avo.
Previous: Simenitra amin'ny toerana fametrahana boom HGY28
Simenitra amin'ny toerana fametrahana boom HGY28
Simenitra amin'ny toerana fametrahana boom
Mitsivalana HGY17 HGY19